भारतविरुद्ध सुपर कपमा सहजादकाे सतक ! सन्दीपको अर्काे छलाङ, ३० हजार डलरमा भारतीय क्लबमा अनुबन्ध - Riddle Nepal
By santosh Last updated Sep 26, 2018
अफगानिस्तानका ओपनर ब्याटस्म्यान मोहम्मद सहजादले भारत विरुद्धको एकदिवसीय खेलमा सतक प्रहार गरेका छन् । एसिया कप अन्तर्गत सुपर फोरको पाँचौ खेलमा सहजादले विस्फोटक सतक प्रहार गरे ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले पहिलो विकेटका लागि ६५ रनको साझेदारी गरेको थियो । तर त्यसपछि सहजादले एकोहोरो रुपमा खेल्दा अर्को तिर लगातार विकेट झर्यो । जसमा उसले एक सय ३२ रन बनाउदा ५ विकेट गुमायो ।
तर ओपनर सहजाद क्रिजमा डटेर खेल्दै सतक बनाए । उनले ८८ बलमा सतक प्रहार गरे । तर एक खेलाडीले सतक बनाउदा टिमको स्कोर कम हुने सन् २००१ पछि अफगानिस्तान पहिलो टिम हो ।
उसले सन् २००५ मा पाकिस्तानले बनाएको एक सय १३१ रनको कम स्कोरको रेकर्ड बराबरी गर्‍याे । यो क्रममा सहजादले १० चौका र ७ छक्का प्रहार गरे ।
सन्दीपको अर्काे छलाङ, ३० हजार डलरमा भारतीय क्लबमा अनुबन्ध
अमेरिका उड्नुअघि हतार-हतार नेकपा प्रवेश गर्ने दाहाल को हुन् ? प्रचण्डका तेह्रदिने दाजूभाइ
ट्रम्पले अमेरिकाको इतिहासमै आफुले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भन्दा हाँसोले हाँसोले सभा